तत्काल वित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०१ तत्काल वित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ
तत्काल वित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ
प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेश सरकार गठन भएको ५ महीना पूरा हुँदै छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता, योजना, प्रदेशको वर्तमान स्थिति र आगामी सम्भावनाका विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता रोशनी भट्टराईले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग गरेको कुराकानी :
प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक भएको १ महीना बितिसकेको छ, हाल तपाईंको मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
हामीले जुन तरीकाले बजेट ल्याउने सोचेका थियौं, अपेक्षाकृत रूपमा राम्रै बजेट ल्याएका छौं । पहिलो पटकको बजेट, त्यसमाथि पनि सङ्घीय सरकाबाट आउने सशर्त अनुदान र योजनाको टुङ्गो १५ दिनअगाडि मात्र लाग्दा हाम्रो बजेटको तयारीको अवधि एकदमै छोटो रह्यो । त्यसैले आवश्यक तयारी पुग्दो भएन । बजेट सार्वजनिकपश्चात् यो अवधिमा मन्त्रालयहरूले पाएको बजेटको सिलिङअनुसार बजेट कार्यतालिकासहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरू तथा योजना प्रमुखहरूको बैठक बसी बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीले नै निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । पूँजीगत खर्चलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तालिका नै बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौं ।
बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन नदिन प्रदेश सरकारको रणनीति कस्तो छ ?
हिजो सिंहदरबारमा जनताको पहुँच थिएन, जनताका समस्यालाई सही रूपमा पनि आकलन गर्न सकिएको थिएन । आज जनताको नजीकमा सरकार आएको छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको रूपमा । यो सरकारको काम भनेकै जनतालाई नजीकबाट सेवा दिने हो । संविधानले नै ३ ओटा सरकारको दायित्व निर्धारण गरिसकेको छ । सेवाको काम स्थानीय सरकारले गर्छ भने विकास निर्माणको काम प्रदेश सरकारले गर्छ । पहिलो चरणमा राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता स्थापित भइसके पनि वित्तीय र संरचनात्मक व्यवस्थापन अहिले पनि सङ्क्रमणकालमै छ । यसरी हेर्दा हिजो सिंहदरबारको सेवाभन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका सेवाहरू जनतामाझ सहजरूपमा पुग्छन् । तर पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनको समस्याका कारण सोचेअनुरूप काम भने हुन नसक्ने देखिन्छ ।
विगतमा कर्मचारीको अभाव तथा असहयोग भएको गुनासो थियो, अहिले कस्तो छ ?
सङ्घीय संरचना व्यवस्थापनकै चरणमा भएको कारण प्रदेशहरूले उठाउँदै आएका यी समस्या अझै पनि यथावत् नै छन् । हामीलाई लाग्छ सबै कार्यालय, योजना र कर्मचारी हस्तान्तरणको चरणमा छन् । हामीले विश्वास लिएका छौं, निर्धारित समयमै आवश्यक संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन्छ । अहिले संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारको मन्त्रीमण्डल नै ठूलो भयो । त्यसले गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी विभाग र संयन्त्र माथि राखिएको छ । जुन कुरा संविधानविपरीत र सङ्घीयताको मर्मविपरीत छ । यसले मूलतः हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केही सङ्कुचित देखिएका छन् ।
प्रदेशको क्षमता र प्रदेशमाथिको विश्वास अझै पनि सङ्घीय सरकारमा कम देखिन्छ । ठूला आयोजनाहरूको हस्तान्तरणमा सङ्घीय सरकारले कञ्जुस्याइँ गरेको छ र यसको मुख्य कारण भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । २०४८ देखि ७४ सम्म कुनै पनि सरकार स्थिर र बलियो बन्न सकेनन् । २५, २६ ओटा सरकार अस्थिर बनेपछि कर्मचारीमा हामी नै स्थायी सरकार हौं भन्ने मनोभावना बढ्यो । हाम्रा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने नाममा स्थायी सरकार भनेर बेलाबेला सम्बोधन गरिरहे, जुन गलत थियो । कर्मचारी भनेको राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मात्रै हो । न त्यो स्थायी सरकार हो, न त्यसलाई स्थायी सरकारकै रूपमा लिन सकिन्छ । जनताको बीचमा आएर सेवा गर्नेभन्दा पनि सिंहदरबारमा शासन गर्ने मनोेवृत्ति र चाहना कर्मचारीमा देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा अहिले पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता देखिन्छ, जसको प्रभाव राजनीतिक नेतृत्वमा पनि परेको छ । यही कारणले सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ ।
प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकारबाट अहिले पनि वञ्चित गराउने नियत देखिएको भन्ने गुनासा उठ्ने गरेका छन्, तपाईंको कार्य अनुभवले के भन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रको ठूलो घेराबन्दीमा अहिले राजनीतिक नेतृत्व परेको मेरो अनुभूति छ । यो स्थिर सरकार हो, बलियो सरकार हो । यो सरकारले संविधान र सङ्घीयताको मूल मर्म र विधिको लक्ष्यलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले जसरी अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो, त्यसका लागि केही सीमाहरू भने देखापर्न थालिसकेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमार्फत सङ्घीयतालाई पूर्णरूपमा असफल बनाउने, पूर्ण कार्यान्वयन हुन नदिने, सिंहदरबारबाटै शासन व्यवस्था गर्ने र अझ जनताको घरदैलोमा पुगेको अधिकारलाई सिंहदरबारमा फर्काउने चालबाजी तथा गतिविधि भइरहेका छन् । संविधानतः प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेका अधिकारहरू पनि हस्तान्तरण गर्नबाट कञ्जुस्याइँ र वञ्चित गरिएको छ । यो मूलत: कर्मचारीतन्त्रको घेराबन्दीको कारणले गर्दा नै भइरहेको छ ।
तपाईंहरूकै सरकार छ, सङ्घीय सरकारलाई यस्ता गुनासो गर्नुभएन ?
मैले खासगरी प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा बजेटपूर्व पनि यो विषयवस्तु उठाएको थिएँ, जुन कुरा बाहिर आइसकेको छ । बजेटका सम्बन्धमा पनि मेरो प्रष्ट धारणा के छ भने पहिला वित्तीय आयोग गठन हुनु पर्दछ, जसलाई संविधानले स्वतन्त्र आयोगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । समग्र राजस्व र अनुदानको क्षेत्रमा र अधिकारको क्षेत्रमा त्यसको समुचित बाँडफाँट भइसकेपछि कसैले कसैलाई कसैको निगाहमा बढी पाउने वा घटी पाउने खालको हुँदैन । अहिले केन्द्रमा वामपन्थी कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ । ६ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हामी दुई तिहाइ छौं । वित्तीय आयोगको माध्यमबाट राजस्व र राज्यका सबै स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट भइसकेपछि प्रदेशहरूले घटी भयो वा बढी भयो भन्ने आवाज उठाइरहनु पर्दैन ।
केन्द्रले निगाहमा दिने र प्रदेशले जहिल्यै आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरी हात जोडेर बजेट माग्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारको जुन बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि वित्त आयोग गठन हुनु पर्दछ । यो विषय मैले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राखिसकेको छु । उहाँहरूले चाँडो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, यद्यपि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ र जटिलता देखिएका छन् । मैले भन्ने गरेको छु, प्रदेश बलियो भएन भने र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेन भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को जुन परिकल्पना गरिएको छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
प्रदेशसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन-२०७५ विवादमा आएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन शुरू भयो ?
खासगरी विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरूको विक्री शुल्क, निकासी शुल्कमा हामीले आर्थिक ऐनमार्फत कर लगाएका थियौं, जुन कानून बनिसकेको छ । संविधानको धारा २३६ मा वस्तुको ढुवानी र सेवा विस्तारमा कुनै पनि दस्तूर र कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा राखिएको छ । यसमा धारा २३६ आकर्षित हुन्छ, यसैले कर नउठाउनू भनेर अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीलाई परिपत्र आएको थियो, हामीले यसलाई सम्मान गर्दै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाटै जवाफ पठाइसकेका छौ ।
हाम्रो तर्क भनेको यहाँ धारा २३६ आकर्षित नै हुँदैन । यहाँ हामीले कुनै पनि वस्तुको ढुवानीको होइन, स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको वन कृषिसम्बन्धी वस्तुको उत्पादनको विक्री शुल्क लिएका हौं, जसबाट मूल्यवृद्धि पनि हुँदैन र यो ढुवानी र सेवा विस्तारसँग पनि सम्बन्धित छैन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा पनि कानून बनाएर प्रदेशले कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घले दुईओटा कुरामा मात्र प्रदेशलाई निर्देशन गर्ने आधार छन् । एउटा राष्ट्रिय महत्वको विषय अर्काे अन्तरप्रदेशको समन्वय र व्यापारको विषय । यो त हाम्रो आन्तरिक विषय हो, सङ्घीय सरकारको परिपत्रकै आधारमा हामीले कानून बनाएर लागू भएको कुरा रोकिन्न ।
प्रदेशको समग्र अवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकार आएपछि प्रदेशका १४ जिल्लामा देखिएको परिवर्तन के हो ?
हामी आएको ५ महीना पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा प्रदेश व्यवस्थापनका लागि हाम्रो सानो बजेट आयो । त्यसलाई सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा प्रदेशका सबै क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता जनाएका छौं । प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशको १ अर्ब २ करोडको बजेटमार्फत ५६ ओटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई राहत हुने र आवश्यक विकास निर्माणका सानातिना कामहरू भएका छन् ।
अहिले हामीले १ नम्बर प्रदेशका १४ ओटै जिल्लाका स्थानीय तहहरू, यहाँका निजीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसकै आधारमा प्रदेशको बजेट आएको छ । यो बजेटपछि जनतामा धेरै ठूलो आशाअपेक्षा देखिएको छ । यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले परिकल्पना गर्नुभएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनामा महत्वपूर्ण जग यसले खडा गर्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीले लिएका छौं ।
बजेट विनियोजनमा भेदभाव भएको र मन्त्रीका गृहजिल्लामा ठूलो बजेटका योजना पारिएको सांसदहरूको गुनासो छ नि ?
यो पटकको बजेटको अलिकति ठूलो फ्लो झापा, मोरङ र सुनसरीमा गयो र तीनै ठाउँबाट मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । सायद यसै कारणबाट भेदभाव भएको भनिएको हुनसक्छ । पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाउँमा असन्तुलन देखापरेता पनि मन्त्री विशेषको क्षेत्र र जिल्लामा अलिकति बजेट बढी केन्द्रित हुने र अरूमा नहुने जुन विगतका परम्परा थिए, मेरो विचारमा त हाम्रो बजेटले यो परम्परालाई तोडेको छ । हामीले समग्र १ सय ३७ ओटै तह अर्थात् १४ ओटै जिल्लामा सन्तुलित विकासमा बजेटमार्फत जोड दिएका छौं । हामीसँग महत्वपूर्ण आयोजनाहरू छन् । जस्तो कि समग्र झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा बाढी र नदीले पार्ने समस्यालाई ध्यान दिई नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बेग्लै आयोजना निर्माण गरेर यसलाई सम्पन्न गर्दै छौं । यसले सन्तुलित विकास गराउँदछ ।
खास गरेर ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुलाई जोड्ने प्रदेश गौरवको आयोजना र महत्वपूर्ण पर्यटन मार्गलगायत हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसका लागि हामीले छुट्टै रकम अर्थ मन्त्रालयमा राखेका छौं । हाम्रो लक्ष्य सन्तुलित विकास हो । यदि अहिले आरोप लगाएको सत्य हुन्थ्यो भने पर्यटन मन्त्रालयबाट छुट्याइएको बजेट सबैभन्दा कम भोजपुरमा परेको छ, त्यसमा मुख्यमन्त्रीको पावर थिएन होला र ? उहाँले चाहेको भए पर्यटनको बजेट भोजपुर लैजान सक्नुहुन्थ्यो । मेरो विचारमा बजेटमा गरिएको विभेदको विषयलाई यसले खण्डन गरेको छ ।
विकास निर्माणका काम कसरी अघि बढिरहेका छन् ? जारी विकास निर्माणका योजना कुनकुन छन् ?
हामीले यो पटकको बजेटमार्फत विराटनगर वरिपरि ४ लेनको चक्रपथ योजनालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाभित्र राखी सडक निर्माण गर्ने भएका छौं । मकालु, सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा हिमालसम्म जाने पदमार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण यसैपालि शुरुआत गर्दै छौं । सगरमाथासम्म पुग्ने केचना–सगरमाथा पदमार्गको काम पनि चालू आवदेखि शुरू हुँदै छ । हामीले विकट जिल्ला सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभालाई जोड्ने हिमाली राजमार्गको परिकल्पना गरेका छौं । त्यसको काम पनि यसैपालि शुरू भएको छ । महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानीको व्यवस्था, मूलत: मुहानहरू नभएको ठाउँमा लिफ्टिङ सिष्टमबाट खानेपानी आयोजनाहरू चालू आवमै शुरुआत भएका छन् । १ नम्बर प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरूको छनोट गरेर सो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि शुरू हुँदै छन् ।
कृषिक्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका प्राथमिकताहरू केके छन् ?
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । कृषिक्षेत्रको विकासको निम्ति विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रमा नयाँ सङ्केतको शुरुआत १ नम्बर प्रदेशबाट हुनेछ । मेरो विचारमा यी सबै कार्यान्वयनमा जाँदा हाम्रो समृद्धिको महत्वपूर्ण जगचाहिँ अहिलेको बजेटले खडा गरेको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कस्तो छ ? प्रदेशको नीति तथा बजेटलाई उनीहरूले कसरी लिएका छन् ?
हामीले मूलतः प्रिबजेट छलफलमै सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका थियौं । हामीले किसानका अगुवाहरू, निजीक्षेत्रमा १४ ओटै जिल्लाका प्रतिनिधि, विकासका सरोकारवाला पक्षका प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारसँग बजेटको प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरेका थियौं । मेरो विचारमा माथिका सबै क्षेत्रलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्ने गरी हामीले बजेट ल्याएका छौं । निजीक्षेत्रसँग हामीले कसरी साझेदारी गर्ने भन्नेबारे सोचिएको छ । तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा निजीक्षेत्रलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं ।
खुला र प्रतिस्पर्धी बजारलाई हामीले मानिसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई बाइपास गर्ने कल्पना गरेका छैनौं । पर्यटन, जलस्रोत तथा कृषि उद्योगलगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहकारीलाई समेत जोड्ने गृहकार्य शुरू भइसकेको छ । सरकारको यो अपेक्षा र चाहनाप्रति निजीक्षेत्र जानकार छन् । निजीक्षेत्र साझेदार भएर अगाडि आउँछन् भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौं ।
७ ओटा प्रदेशमध्ये १ नम्बर प्रदेश कुन अर्थमा फरक छ ? १ नम्बर प्रदेश १ नम्बर नै बन्ने सम्भावना कति छ ?
अहिलेकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर १ कृषिक्षेत्रमा अरूभन्दा अगाडि छ । नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार कृषि हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ठूलो छ । प्रदेश नं. १ मूलत: कृषिमा नै आत्मनिर्भर छ । त्यस्तै, नेपालको निर्यातको ४० प्रतिशत हिस्सा १ नम्बर प्रदेशले ओगटेको छ । यहाँको चिया, अदुवा, अम्रिसो, रुद्राक्ष, चिराइतोलगायत निर्यात हुन्छ ।
अहिले हामीले रू. ३६ अर्बको खाद्यान्न भित्र्याइरहेका छौं । त्यसलाई कम गर्दै समग्र व्यापारघाटालाई घटाउन १ नम्बर प्रदेशको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । कृषि निर्यातबाट हामी विदेशी मुद्रा पनि भित्र्याइरहेका छौं । यसरी हेर्दा कृषिमा अरूभन्दा हाम्रो प्रदेश अब्बल छ । पर्यटकीय हिसाबमा पनि हामी अगाडि नै छौं । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा, नेपालका मुख्य हिमशृङ्खला र संसारकै होचो उपत्यका अरुण उपत्यका पनि यहीँ छ । यस्तै, महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू ताप्लेजुङको पाथिभरा, खोटाङको हलेसी, सुनसरीको बराह क्षेत्र, थुप्रै सिमसारहरू १ नम्बर प्रदेशमा छन् । यहाँ जलविद्युत्को सम्भावना सबैभन्दा बढी छ ।
७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना हामीकहाँ छ । अरुण तेस्रोलगायत अन्य आयोजनाबाट मोटामोटी ३४ हजार मेगावाट विद्युत् हाम्रो प्रदेशमा उत्पादन हुन सक्ने क्षमता छ । प्रदेशले पनि सङ्घ र निजी क्षेत्रसँग मिलेर ५ वर्षमा १५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनाबद्ध रूपमा लक्ष्यलाई सही ढङ्गले पछ्याउन सक्यौं भने १ नम्बर प्रदेश अरूभन्दा समृद्ध र विकसित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
वार्षिक कार्यक्रम र योजना त बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले छुट्याएको छ । प्रदेशमा त्रिवर्षीेय, पञ्चवर्षीय जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ केके छन् ?
हामी चाँडै महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश विकास परिषद् जस्ता आयोग र संरचनाहरू पनि बनाउँदै छौं, जसले त्रिवर्षीेय, पञ्चवर्षीय जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू निर्धारण गर्नेछ । जलस्रोतको क्षेत्रमा १५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको काम शुरू हुँदै छ । यसका लागि जलविद्युत लगानी कम्पनी पनि गठन गर्दै छौं । यही कम्पनीमार्फत निजीक्षेत्रमा सार्वजनिक साझेदारीको माध्यमबाट उत्पादनमा जोड दिनेछौं । कृषिमा ५ वर्षसम्म १ नम्बर प्रदेशबाट देशलाई नै खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्ने लक्ष्यमा पुर्‍याउने गरी तयारी अघि बढेको छ । देशमा विदेशबाट भइरहेको खाद्यान्नको आयातलाई प्रदेश नं. १ ले विस्थापित गर्नेछ । कृषि क्षेत्रको विकास प्रदेश सरकारले गर्ने गरी हामी अघि बढिसकेका छौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका धेरै आयोजनालाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौं ।
प्रदेश सरकारले गरीबी निवारणतर्फ कसरी काम गर्नेछ ?
देशमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, व्यवस्था परिवर्तन भए, तर जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्थामा धेरै ठूलो परिवर्तन हुन सकेन । विगत लामो समयसम्म अधिकारका निम्ति एकताबद्ध भएर हामी लडिरहेका थियौं । त्योबेला हाम्रो अधिकारका लागि सङ्घर्ष थियो । अब अहिले सरकार, प्रतिपक्ष र सबै सरोकारवालाको अर्जुनदृष्टि भनेको समृद्धिमा छ । समृद्धिको एजेण्डालाई प्रतिपक्ष वा अरू कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन ।
अब भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्र हुँदैन । हामीले जनताको जीवनस्तर पनि माथि उठाउनुपर्दछ । त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने हैसियतसम्म हामीले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्दछ । यहाँको गरीबी अर्थात् बेरोजगारी अन्त्य गर्न हामीले कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादनलाई प्रमुख माध्यम मानेका छौं । युवा स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमहरू पनि हामीले ल्याएका छौं, जसले बेरोजगार युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउँदछ । विदेशिने युवा जनशक्तिलाई अनुदान वा अन्य विभिन्न कार्यक्रम र योजनाका साथ स्वदेशमा स्वरोजगार बनाउने र यहाँको गरीबी अन्त्य गर्ने विशेष कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।
अबको ५ वर्षपछि प्रदेश कस्तो हुनेछ ?
सरकार प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले सङ्घीयताको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन र आवश्यक संरचनाको निर्माणमा यो १ वर्ष बित्ने मैले देखेको छु । त्यसपछि एकदमै तीव्र गतिमा प्रदेशको विकास र समृद्धि अगाडि बढ्दछ । ५ वर्षभित्रमा नेपाललाई मध्यम विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्य वामपन्थीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, त्यो लक्ष्य १ नम्बर प्रदेशले सबैभन्दा पहिला पूरा गर्नेछ । नेपालको कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको क्षेत्रमा समग्र विकासबाट ५ वर्षको अवधिमा नेपालकै उत्कृष्ट र नमूनायोग्य १ नम्बर प्रदेश बन्दछ । त्यो बाटोमा प्रदेशलाई अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।